DF oo dhaqan galinaysa xeerarka xoojinaya la dagaalanka musuqa+Sawirro | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta DF oo dhaqan galinaysa xeerarka xoojinaya la dagaalanka musuqa+Sawirro
DF oo dhaqan galinaysa xeerarka xoojinaya la dagaalanka musuqa+Sawirro
Wasaaradda cadaadala XFS ayaa Muqdisho ka furtay wadatashi ku aadaan dib ugu biirista hiishiiska caalamiga ah ee la dagaalanka musuq-maasuqa.
Wadatashigan oo ku saabsan hirgalinta istiraajiyada Qaran ee la dagaalanka musuq-maasuqa iyo dib ugu biirista heshiiska caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa ayaa magaalada muqdisho ka furay sii hayaha wasiirka cadaalada dalka abuukaate Xasan xuseen Xaaji.
Shirkaan oo socon doono muddo labo cesho ah waxaa ka qeyb galaya xubno ka socday dowlad goboleesyada dalka, xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda, xafiiska hanti dhowrka guud Qaranka, bankiga dhexe, xafiiska xeer ilaalinta iyo Booliska kuwaas oo ku shaqo leh arrimaha nidaamka maaliyadda dalka iyo la dagaalanka musuqa.
Sii hayaha wasiirka cadaalada dalka abuukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in wasaaraddu ay xooga saareyso shuruucda lagu hagayo arrimaha cadaaladda iyo la dagaalanka musuqa, sidoo kalena ay dib u soo celinayso xiriirkii caalamiga ahaa ee la dagaalanka musuq-maasuqa ee Soomaaliya aduunyada kala dhexeeyey.
Golaha wasiirada xukumadda federaalka Soomaaliya ayaa 4-tii bishii lixaad ee sanadkan ansixiyay xeerka istaraajiiyada Qaran ee la dagaalanka musuq-maasuqa ee 2020 ilaa 2023-ka, kaas oo ku soo beegmay, xilli tallaabooyin loo qaaday la dagaalanka musuqa islamarkaana dad ay ku jiraan saraakiil dawladeed loo maxkamadeeyey maamul xumo maaliyadeed ee ay gaysteen.
Maqaal horeSawirro: Madaxweyne Qoor Qoor oo si weyn loogu soo dhoweeyey Baydhabo
Maqaal XigaSawirro: Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiye Najah oo gaaray Marka